Ihe omuma ihe omuma - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.
Chengda Rubber & Plastic nwere ọgaranya ahụmahụ na silicone na roba ihe nhọrọ na mmepe, anyị nwere ike ikwu na nri silicone na roba ihe ma ọ bụ ịzụlite omenala roba usoro maka gị dị ka kwa gị kpọmkwem chọrọ, na roba ihe nhọrọ ga-dabere na ezigbo ego-irè , iji nweta uru kacha maka oru ngo.
E nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na ihe onwunwe nke silicone na roba, nke a na-eji ya na ngwaahịa na gburugburu ebe obibi dị iche iche. Ọmụmaatụ: Anyị nwere nri ọkwa silicone ihe onwunwe, ọgwụ na ahụ ike ọkwa silicone ihe onwunwe, conductive silicone ihe onwunwe, elu na-agbanwe ihe onwunwe, okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ ihe, ire ọkụ retardant ihe onwunwe wdg na anyị nwekwara EPDM, NBR ..rubber ihe. Anyị nwere ike ịchọta ma jiri ihe ziri ezi dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Chengda Rubber & Plastic na-onwem na silicone inggwakọta igwe na roba inggwakọta igwe, ájá-àmà silicone inggwakọta ụlọ, na ahụmahụ ndị ọrụ na-ezitekwara ezi arụmọrụ roba na silicone ihe onwunwe anyị roba ịkpụzi omumuihe. .
Chengda Rubber & Plastic wuru njikọ siri ike na imekọ ihe ọnụ ogologo oge na ụlọ ọrụ na-eduga roba ogige ndị nwere ndị ọkachamara nwere ọmarịcha ikike na ikike ọhụụ kachasị mma, anyị nwere ike ịzụlite usoro eji emepụta roba ka ndị ahịa chọrọ nkọwa zuru oke n'oge dị mkpirikpi.